Holm ee sanduuqa fikrad | Holmbygden.se
Ma leedahay fikrad fiican – waaweyn iyo kuwo yaryar?
Waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso in wax ku darsan kari lahaayeen Baaddiyaha Holm oo dheeraad ah noole ama wax kale oo xigmad leh. Kaliya xadka caasinimada…
Wadajir, Annagu waxaannu nahay fikradaha fudud more wanaagsan. fikradaha halkan bixin karaa tusaale. loo isticmaalo sida ku saleysan shirarka kala duwan on Holms horumarinta – haddii aad ka qayb qaadan kartaa. Waxa kale oo ay noqon kartaa sida in HBU hagaajin karo ama kabsato on xaq u. Ha ka waaban inaad nala soo xiriir kasta oo, soo jeedinta No waa mid aad u doqon!
Sidee baan gacan ka fikradayda?
Habka ugu sahlan waa in la isticmaalo foomka our on xaq u. Buuxi sanduuqyada iyo soo diri, cad! Ma rabtaa inaad fadlan ku lifaaq file kasta, dokumentiga ama sawirka si aad u soo jeedin, waxa ay sidoo kale waa wanaagsan yahay.
Sidoo kale waa suurto gal ah in email noogu haddii ay si fiican ku haboon: info@holmbygden.se.
Ma rabtaa in aad in aadan sheegin?
Waa dabcan suurad wacan, haddii aad rabto in aad noo sheegto qofka aad tahay, laakiin waxa ay sidoo kale sii joogi kartaa si qarsoodi ah.
laga yaabaa in aad rabto in aad xaq ugu noqon contactable Holmbygden.se (#ShepherdsHut), laakiin si qarsoodi ah tan dibadda ah oo aad soo jeedin sidoo kale waa wanaagsan yahay. Haddii ay sidaas tahay, ku qor hoos “Isgaarsiinta Personal”. U dir fikradaada internetka ee.
All talooyin waa la soo dhawaynayaa.
Title of fikradaada:*
Description of fikradda:*
fariin Personal in webmaster:
hoos ku fayl lifaaq:
in 2 (isticmaal foomka dhowr jeer haddii loo baahdo):
22/10: Utah: class digniin 1, baraf, V... Tisdag eftermiddag 5-9 cm snö i &Ar... Akhri wax dheeraad ah
Risk för köer pga beläggningsarbete i bä... Akhri wax dheeraad ah
19/10: shirka waalidka!!
19/10: faahfaahin Xidhiidh